Black currant "Dachnitsa": nkọwa nke ụdị, foto, ịkụ na nlekọta - Currant - 2020
A na-achọta osisi nwa currant n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpokoro okpomọkụ ọ bụla. Nke a bụ n'ihi uto nke tomato na ọgwụ Njirimara nke osisi. Kwa afọ, ndị na-elekọta gardeners na-ahọrọ ụdị "Dachnitsa" dị iche iche. Kedu ihe kpatara nke a, anyị ga-aghọta taa: anyị ga-amata nkọwa na njirimara nke ụdị dịgasị iche iche, yana àgwà nke ịkụ ihe ma lekọta.
Ụfọdụ atụmatụ nke dịgasị iche iche
Ọrịa na Nsogbu Pest
Oké ọkọchị na-eguzogide ma na-eguzogide mmiri
Oge mgbakọ na mkpụrụ
Kedu otu esi ahọrọ seedlings mgbe ịzụrụ
Oge na ọdịda
Video: ihe atụ nke kere currant seedlings
Ebumnuche nke nlekọta oge
Nchedo oyi oyi
N'ihi ya agafe iche "Seedling Blueberries" na "Bredthorp" Ndị ọkà mmụta sayensị sitere na Ụlọ Ọrụ Nyocha nke Siberia Horticultural ewetawo ọtụtụ currants black akpọ "Dachnitsa". Ndị dere ya bụ Z. Zotov, T. Ogoltsova, L. Bayanova na S. Knyazev. Edere omenala na 2004 dị ka osisi a chọrọ maka ịkụ ihe na mpaghara North-West na Volga-Vyatka.
Ihe omimi nke ihe di iche iche nke di iche iche di na otutu ihe: ufodu nime ha ka apuru imuta site na nkowa nke nkpuru na akwukwo nke "curkin" Danny.
Ị ma? Usoro nke owuwe ihe ubi currants maka oyi bụ nke dị oké mkpa. Iji chebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ vitamin na mineral niile dị na ya, ọ ka mma ịka ifuru. Obere ihe na-abaghị uru, mana ka ọ ka na-abaghị uru bara uru na-adịgide na mkpụrụ osisi mịrị amị na ala.
"Ezumike na-ebi ndụ n'oge okpomọkụ" bụ obere osisi, nke dị nro, ọ bụghị nke a na-agbanye mkpọrọgwụ, nke nwekwara ụdị ọdịdị ọ bụla. Mkpuru eto eto eto na-acha acha odo odo, na-egbuke egbuke, ha enweghịkwa ọkwá. Mgbe osisi ahụ gasịrị, agba nke Ome na-abụ ntụ chacha-agba aja aja, ha na-enwu ntakịrị obere ma nọgide na-enwe nsogbu. Akwụkwọ nke shrub bụ obere, ise-lobed. A na-ese akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na obere nchara ọla. N'oge oge okooko osisi, a na-eji osisi na-acha odo odo chọọ ọhịa ahụ mma.
Nke a na-amị mkpụrụ buru ibu: ịdị arọ nke otu beri nwere ike iru 5 g, na nkezi, onye nke ọ bụla n'ime ha dị 2-3 g. Ụdị mkpụrụ osisi ahụ dị gburugburu, ọ na-ejikwa akpụkpọ anụ na-acha anụnụ anụnụ kpuchie ha. Berry "Dachnitsa" dị ụtọ nke ukwuu, ọbụna na akpụkpọ ahụ abụghị ọnyá, àgwà nke ọtụtụ ụdị nwa currant. Ihe nhicha nke pulp dị nnọọ nro, a na-egosikwa uto ya na 4.6 isi nke 5. Ọ dịkwa mma ịkọtara na a na-enye mkpụrụ osisi ahụ ọkụ.
Ọ dị mkpa! 100 g nke mkpụrụ osisi currant na klas a nwere 9.3% shuga na 193 mg nke ascorbic acid, ebe a chọrọ kwa vitamin C nke okenye bụ 75-90 mg. Nke ahụ bụ, iri nri ọgụgụ isi nke currants, anyị na-egbo mkpa ahụ maka ascorbic acid maka ụbọchị dum.
Ụdị nwa currant a na-ezo aka ịmatakwu oge. Keisi mfri eke tomato ripen ke June, nke bụ ugbua uru. Ka anyị lelee ihe ọzọ bụ n'ihi na a ma ama nke "Dachnitsa".
The shrub bụ nke ukwuu na-eguzogide ọgwụ ọrịa na pests. Ọ naghị atụ egwu mpempe powdery ma ọ bụ akụrụ akụrụ, nke ahụ bụ, ihe ndị ahụ na-ahụkarị nke na-emekarị ka ndị na-elekọta ubi nweta nsogbu nke na-eto eto ndị ọzọ.
Mkpụrụ osisi na-egbochi enweghị mmiri na nwata. Ma osisi toro eto na-ejikarị anabata mmiri, ọ dịghị emetụta mkpụrụ na mkpụrụ tomato. Akụkụ ọzọ nke ọdịbendị bụ elu na-eguzogide obere okpomọkụ.
Ọ dị mkpa! Ụdị ntu oyi ruru "32" Dachnitsa "adịghị egwu. Mana ihe ize ndụ nke ihe ubi ma ọ bụ imebi ohia nwere ike ime ma ọ bụrụ na ntu oyi na-eme n'oge oge okooko osisi: na nke a, ndị ọrụ ugbo nwere ahụmahụ na-atụ aro ka e jiri ya mee ihe.
Shrub amalite ịmị mkpụrụ na 3 afọ mgbe ọdịda. "Onye na-ebi ndụ na-ebi ndụ" na-enye onwe ya nri, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe ọkụkụ ahụ bụrụ ọgaranya mgbe nile, ịkwesịrị ịkụnye 2-3 ụdị nwa currant ọzọ na saịtị, nke ga-eme dị ka pollinator.
Ekwesiri ighota na ihe ubi ahu na-eme ka onye obula buru ibu kama o na-eme ya. A na-ele afọ 5-8 dị ka ọnụ ọgụgụ kasị elu nke mkpụrụ osisi: n'oge ahụ, a na-anakọta ihe dị ka 1.5 kilogram nke currants site na ohia. Ma ọ bụrụ na i nwere nnukwu ihe ọkụkụ, dịka ọmụmaatụ, na 1 hectare, ị nwere ike ịnakọta ruo tọn 9 nke tomato.
N'ịchọpụta transportability nke dịgasị iche iche na 5-akara, "Dachnitsa" kwesịrị 4,2. Nke a na-esiteghị na ya enwetaghị ọnụego kachasị elu n'ihi n'eziokwu ahụ maka na ọ bụrụ na ị na-ebufe mkpụrụ osisi tomato n'oge dị anya, ọ dị mkpa ịmara oke ntozu ya. Mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ, ọ dị mwute ikwu na ọ bụ ihe na-abaghị uru ibufe ha.
Nke a na-amị mkpụrụ nnukwu uto na nnukwu maka iri nri. Mkpụrụ ọhụrụ dị ezigbo ụtọ, ọ ga-enwekwa ihe ịga nke ọma dochie ihe oriri ọ bụla dị elu calorie n'oge okpomọkụ. Site na mkpụrụ nke "Dachnitsa" ị nwere ike esi nri jams dị mma, marmalade, marshmallow na marmalade. Ọ dị mma ịkwadebe ihe ọṅụṅụ, mkpụrụ osisi ọṅụṅụ, compotes, syrups, liqueurs na tinctures si esi ísì ụtọ na nke na-amị mkpụrụ; ị nwere ike igicha ha na shuga ma ọ bụ ghaa ha.
Ghọta onwe gị na ntụziaka ntụziaka nwa currant: currants n'ala na shuga, jam, jam nkeji ise, tincture vodka, moonshine na mmanya, mmanya.
A na-atụ aro mgbe niile ịzụta ihe onwunwe iji zụta site na ndị na-ere ahịa tụkwasịrị obi ma ọ bụ na nurseries ọkachamara. Ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na-enye ndụmọdụ inye onyinye 2 afọ seedlings: Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na osisi ndị dị n'oge a ga-agbanye mgbọrọgwụ ngwa ngwa, na ị gaghị echere ogologo oge maka mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ. Usoro mgbọrọgwụ chọrọ nlezianya zuru ezu tupu ịzụta nwa ohia: ọ ga-abụ nke 2-4 lignified mgbọrọgwụ nke ọbara ọbara-agba aja aja agba nke 15-20 cm, na-enwe ọtụtụ nke mkpa, eri-dị ka, ọkụ ọkụ mgbọrọgwụ.
Ọ dị mkpa! N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-enweta seedlings, usoro mgbọrọgwụ nke a na-ese na ájá-aja aja, agba ọchịchịrị. Agba a na-egosi na nwa osisi shrub bụ nke oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, nke akpọnwụwo, ma ọ bụ ọrịa ma ọ bụ ọrịa.
Mkpụrụ osisi nwere ike inwe mkpịsị osisi 1 ma ọ bụ 2, ogologo ya kwesịrị ịdị n'agbata 30-40 cm. Ogbugbo nke osisi dị mma kwesiri ịdị monochromatic ma gbaa.
Nke mbụ, ị ga-ekpebi ebe ebe osisi ahụ ga-etolite: ọ ga-abụrịrị na ọkụ na anwụ na-acha. Maka uto di nma nke di iche iche di iche iche "Dachnitsa Ihe kacha mkpa bụ enweghị ifufe na nkọwa na saịtị ahụ.
Ọ kacha mma ịkụnye ọkụ, ịpụ, ubé acid na ala na-eme nri. N'okwu a, ala nwere ike ịbụ ogbenye, ma na nke a, a chọrọ nkwadebe maka ịkụ ihe na ịmebata ihe eji emepụta ihe dịka humus na compost. Mmiri nke mmiri ala adịghị mma.
Ndị ọkachamara na-atụ aro ka ịkụ ihe ọkụkụ na-erule oge September. A na-ele oge a anya dị mma, ebe ọ bụ na mkpụrụ osisi ahụ ga-enwe oge iji gbanye mgbọrọgwụ ma mee ka ọ dị ọhụrụ gaa n'ihu igwe oyi.
Na-agụkwa banyere usoro nke mmeputakwa nwa currant na akuku nkà na ụzụ na ọdịda.
Oghere maka akuku kwesịrị ịdị 50x50 cm na 30-40 cm miri. Ebe dị anya n'agbata bushes kwesịrị ịdịkarịa ala 1.5 mita. Na ala nke fossa ọdịda na-etinye akwa oyi nke humus ma ọ bụ compost, 1 tsp. superphosphate na obere osisi ash, wee fesa ya na oji ojii. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-etinye seedlings ahụ na olulu mmiri, na-eme ka mmiri dị jụụ ma na-agbanye ala gburugburu ha, a na-egbutu mkpuru osisi ahụ ka 2-3 wee hapụ.
Ntughari ndi ozo di iche iche nke "Dachnitsa" di na iwu ndi di mfe, ya bu iji jide n'aka nlebara anya. Kedu, olee otu na mgbe ị kwesịrị ime - ka anyị leba anya karịa.
Mụtakwuo maka nlekọta oge nlekọta oge: n'oge opupu ihe ubi, ụbịa, nkwadebe maka oyi.
Ngwọta mmiri dị mkpa maka osisi na-eto eto - ha mmiri dị ka elu oyi akwa ala dries. Ọ bụ ezie na ịgbara dị mkpa maka ndị toro eto, karịsịa n'oge oge ovaries na fruiting. Enweghị mmiri nwere ike imetụta oke na uto nke mkpụrụ osisi. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọpụta na ala gbara ohia ọkụ, ị kwesịrị ịkụnye osisi ahụ na mmiri 1.5-2. Ma ọ bụrụ na ikuku ikuku dị elu, ọ ga-adị mma ịkụnye osisi ndị ahụ na egbe ahụ.
Usoro dị otú a dị mfe ma dị mkpa, dịka ịtọghe ala, weeding from weeds and introduction of mulch, kwesịrị ime mgbe nile na maka "ndị na-akọ ubi". Omenala adighi anabata ahihia ndi ozo, ala nke gbara ya gburugburu kwesiri ibu ihe di nma, ya mere ọ dị mkpa ka ịtọpu mgbe mgbe. Iji nwee ike ijide mmiri n'ime usoro mgbọrọgwụ nke osisi ahụ, a na-atụ aro ka ị gbanye ala gburugburu ohia na humus.
Ozugbo oge, ya bụ na oge opupu ihe ubi, ọ dị mkpa iji mee ka nitrogen fertilizers. Nke a nwere ike ịbụ urea ma ọ bụ ammonium nitrate n'ime 50 g nke ihe maka ohia ọ bụla.
Ị ma? Ọ bụghị naanị na tomato bụ uru, kamakwa akwụkwọ blackcurrant. Tea sitere na akwukwo osisi a ma obu nke ohuru nke osisi shrub na enyere aka ikpochapu cholesterol, kpochapu obara di iche iche ma mee ka akwara. Mmiri a bara ezigbo uru maka ma ndị okenye ma ụmụaka.
Osisi shrub kpochapụrụ ozugbo mgbe ọ kụrụ na-etolite n'ime afọ ise mbụ. Na oge opupu ihe ubi, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị agadi ochie ka ebipụrụ, na-ahapụ nanị ndị kachasị ike na ndị kachasị ike, na ndị na-eto eto adịghị emetụ aka. N'ihi nke a, ohia nwere ike dị iche iche nke afọ dị iche iche. N'ihi na osisi toro eto karịa afọ ise, na-emefu oge ọ bụla sanitary kwachaa - wepu ihe mebiri emebi, akpo na oyi kpọnwuru.
Mụta otú ị ga-esi belata currants.
"Dachnitsa" dịgasị iche iche na-ezo aka na-eguzogide oyi, ma osisi ndị na-eto eto ka na-achọsi ike chebe site na oké frosts. Iji mee nke a, na mbubreyo oge mgbụsị akwụkwọ, ọ dị mkpa ka ị gbanye ala gburugburu ohia na sawdust, epupụta, beles ma ọ bụ humus iji zere hypmiamia nke usoro mgbọrọgwụ. Ọ bụrụ na atụle anya oyi na-acha oyi na-atụ, mgbe ahụ, ọ bara uru ikpuchi ohia n'onwe ya: lapsel, polyethylene ma ọ bụ kaadiboodu ga-eme maka nke a.
Ị ma? Enwere ike ịhụ currant bushes n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ nile nke ụwa anyị, ma e wezụga naanị 2 continents - Antarctica na Australia.
Ka anyị lee isi uru ụdị nwa currant "Dachnitsa":
Na-atọ ụtọ ụtọ tomato nke nwere ike iji ọhụrụ ma jiri maka blanks.
Nnukwu mkpụrụ osisi.
Iguzogide ọrịa na pests.
Ji achọ shrub.
Iji Cons Ụdị dịgasị iche iche nwere ike ịgụnye ndị a:
na-amị mkpụrụ, alaka ndị ahụ gbagọrọ agbagọ, enweghị ike iguzogide;
achọrọ ka e guzobere nwa ohia nke mbụ afọ ise mgbe ọ kụsịrị;
Ọ bụrụ na ị na-atụfu oge ma ghara ịnakọta mkpụrụ n'oge, a na-asa ha n'ala.
Ugbu a, ị maara na ụdị dị iche iche "Dachnitsa" nwere ọtụtụ uru: ọ dịtụghị mma na nlekọta na mkpụrụ osisi siri ike, mkpụrụ ya na-atọ ụtọ ma na-arụ ọrụ. Ihe akaebe nke a bụ ọtụtụ nyocha dị mma nke ndị na-elekọta ubi, bụ ndị jisiri ike ghọta nke a.